သင့်အိမ်ရဲ့ အနေအထားကို နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မြှင့်နိုင်မယ့် အမိုက်စား အိုင်ဒီယာများ - TheeSayChin
သင့်အိမ်ရဲ့ အနေအထားကို နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မြှင့်နိုင်မယ့် အမိုက်စား အိုင်ဒီယာများ
“ဒီဇိုင်း၊ ပုံစံတွေ ထုတ်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ တော်တော်များများက ဘာနဲ့ တူနေရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆအမှားတွေနဲ့ လုပ်ကြတယ်။ ဘယ်အရာနဲ့ တူရမယ်၊ ဘယ်လို ခံစားရတယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်၊ ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသာ ဒီဇိုင်းပညာဖြစ်တယ်”
ဒါ စတိဗ်ဂျောဘ့်စ် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်ပါ။ ဒီလိုပဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နေရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထူးခြားအောင် ပြောင်းလဲလိုတယ်၊ ပြီးတော့ ဒါက စိတ်နှလုံးကို ရွှင်လန်းစေတဲ့အပြင် မျက်စိပဒဿလည်း ဖြစ်စေတယ်။ အခုလည်း ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းတဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့ လက်တွေ့ကျကျနဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အသွင်သဏ္ဍာန်တွေကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာများကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ ပုံတွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်က မြင်ရခဲ၊ တွေ့ရခဲပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အိမ်အလှဆင် ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ဂေဟာကို ပြောင်းလဲဆန်းသစ်ချင်ပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး လှုံဆော်မှုတွေ ရနိုင်ပါတယ်။
READဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဂျက်စတင်ဘီဘာပုံစံ Sex Doll
ရေကူးကန် အကြမ်းကြီးထဲမှာ ကူးလိုသူများအတွက်
ရတနာတွေ စီချယ်ထားတဲ့ လှေကားကို အသုံးပြုချင်ရင်လည်းရတယ်….
အာကာသထဲမှာ ဘီလိယက်ထိုးတဲ့ ခံစားမှုနော်….
မီတာခကတော့ အရင်လထက် နည်းနည်းပိုတက်သွားနိုင်တယ် :3
တောထဲမှာ ရေချိုးတဲ့ ဖီးလ်လေးလိုချင်ရင်တော့ ဒီလိုလုပ်လည်းမဆိုးဘူးနော့…..
အမြင့်ဆုံးမှာနေပြီး တိုက်ခန်း သိပ်မကျယ်တဲ့သူတွေအတွက် အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။
အိမ်က ကလေးတွေ ပျော်တာပေါ့….
ကော်ဇောနဲ့ လက်ဖက်ရည်စားပွဲကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာပါ…
ဒါတော့ တကယ့် သဘောကျတယ်….
အိမ်က အပိုပစ္စည်းတွေနဲ့လည်း အခုလိုမျိုး အလှတန်ဆာဆင်လို့ရပါတယ်….
ငြိမ်ငြိမ်မထိုင်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ပါ…. စတာပါ :3
“ဒီဇိုငျး၊ ပုံစံတှေ ထုတျဖို့ စဉျးစားတဲ့အခါ တျောတျောမြားမြားက ဘာနဲ့ တူနရေမယျဆိုတဲ့ အယူအဆအမှားတှနေဲ့ လုပျကွတယျ။ ဘယျအရာနဲ့ တူရမယျ၊ ဘယျလို ခံစားရတယျဆိုတာထကျ ဘယျလောကျအသုံးဝငျတယျ၊ ဘယျလိုအလုပျဖွဈတယျဆိုတာကသာ ဒီဇိုငျးပညာဖွဈတယျ”
ဒါ စတိဗျဂြောဘျ့ဈ ပွောခဲ့တဲ့ စကားတဈခှနျပါ။ ဒီလိုပဲ တိုးတကျပွောငျးလဲနတေဲ့ လူတှဟော သူတို့ရဲ့ နရော၊ ပတျဝနျးကငျြကို ထူးခွားအောငျ ပွောငျးလဲလိုတယျ၊ ပွီးတော့ ဒါက စိတျနှလုံးကို ရှငျလနျးစတေဲ့အပွငျ မကျြစိပဒဿလညျး ဖွဈစတေယျ။ အခုလညျး ဖနျတီးနိုငျစှမျးကောငျးတဲ့ လူတဈခြို့ရဲ့ လကျတှကေ့ကြနြဲ့ ရငျသပျရှုမောဖှယျ အသှငျသဏ်ဍာနျတှကေို ပေါငျးစပျထားတဲ့ ဒီဇိုငျးအိုငျဒီယာမြားကို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
အခုဖျောပွထားတဲ့ ပုံတှဟော အငျတာနကျပျေါက မွငျရခဲ၊ တှရေ့ခဲပွီး စိတျလှုပျရှားဖှယျကောငျးတဲ့ အိမျအလှဆငျ ဒီဇိုငျးအိုငျဒီယာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့အိမျဂဟောကို ပွောငျးလဲဆနျးသဈခငျြပွီး ဖနျတီးနိုငျစှမျးကို မွှငျ့တငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီပုံလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး လှုံဆျောမှုတှေ ရနိုငျပါတယျ။
READဈေးကှကျအတှငျး ဝငျရောကျလာတဲ့ ဂကျြစတငျဘီဘာပုံစံ Sex Doll
ရကေူးကနျ အကွမျးကွီးထဲမှာ ကူးလိုသူမြားအတှကျ
ရတနာတှေ စီခယျြထားတဲ့ လှကေားကို အသုံးပွုခငျြရငျလညျးရတယျ….
အာကာသထဲမှာ ဘီလိယကျထိုးတဲ့ ခံစားမှုနျော….
မီတာခကတော့ အရငျလထကျ နညျးနညျးပိုတကျသှားနိုငျတယျ :3
တောထဲမှာ ရခြေိုးတဲ့ ဖီးလျလေးလိုခငျြရငျတော့ ဒီလိုလုပျလညျးမဆိုးဘူးနော့…..
အမွငျ့ဆုံးမှာနပွေီး တိုကျခနျး သိပျမကယျြတဲ့သူတှအေတှကျ အလှနျသငျ့တျောပါတယျ။
အိမျက ကလေးတှေ ပြျောတာပေါ့….
ကျောဇောနဲ့ လကျဖကျရညျစားပှဲကို ပေါငျးစပျဖနျတီးထားတာပါ…
ဒါတော့ တကယျ့ သဘောကတြယျ….
အိမျက အပိုပစ်စညျးတှနေဲ့လညျး အခုလိုမြိုး အလှတနျဆာဆငျလို့ရပါတယျ….
ငွိမျငွိမျမထိုငျတတျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတို့အတှကျပါ…. စတာပါ :3
← ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက သဝန်တိုပြီး ပြန်ဂရုစိုက်လာအောင်လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်း(၄)မျိုး
သူငယ်ချင်းလေးတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ ချစ်စဖွယ် တိရစ္ဆာန်လေး(၂) ကောင် →
“ရာရာ” ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာ နဲ့ ပရိသတ်တွေ တစ်ခဲနက် ချီးကျူးခြင်းခံနေရတဲ့ ဘုန်းရှိန်ခန့်